Mareykanka oo faah faahiyay khasaaraha Alshabaab ka soo gaaray duqeymihii ugu dambeeyey – WARSOOR
Africom – (warsoor ) – War qoraal ah oo ka soo baxay taliska ciidamada militariga Mareykanka Afrika ee Africom ayaa lagu faah faahiyay weeraro dhanka cirka ah oo ay ka fuliyeen Soomaaliya,maalmihii la soo dhaafay,iyagoo ku bartilmaameedsaday saldhigyo ay lahaayeen maleeshiyada Alshabaab.
Taliska Africom ayaa sheegay in ilaa 6 weerar ay ka fuliyeen deegaano ka tirsan gobolka Mudug Bishan November,duqeymahaasi oo lagu dilay ilaa 55 ka tirsan horjoogayaal iyo Maleeshiyaad ka tirsan koxda ALshabaab.
Weerarkii ugu dambeyeey ayaa talisku sheegay in lagu dilay ilaa 3 xubnood oo ka tirsan argagixisada Alshabaab,iyagoo sheegay in ay sii xoojin doonaan howlgaladaasi si Alshababa looga difaacayo dhibaataynta shacabka Soomaaliyeed.
Waxaa sido kale qoraalkaasi lagu sheegay in ciidamadu ay fuliyeen weeraradasi iyagoo ka feejigan in aan wax dhibaato ah soo gaarin shacabka,taasina lagu guuleystay.
Mareykanka ayaa sheegay in ilaa 36 weerar uu ka fuliyay Soomaaliya sanadkan 2018 gudihiisa,kuwaasi oo ujeedku ahaa burburinta iyo beegsiga xarumaha iyo maleeshiyada ALshabaab.